Nagarik Shukrabar - जीवनको ग्रेड कसरी बढाउने?
आइतबार, १९ मङि्सर २०७८, ०४ : ४६
सोमबार, ३० असार २०७६, ०१ : ५४ | प्रकाश जंग थापा
यद्यपि कतिपयलाई भने कम ग्रेड आएकोमा मन खिन्न भएको हुन सक्छ। अब धेरै भयो उत्सव मनाउने क्रम। धेरै भयो तामझाम। त्यसैगरी खिन्न हुने, दुःख व्यक्त गर्ने र पश्चतापमा जल्ने क्रम पनि धेरै भयो। अब एउटा वास्तविक कुरा गरौँ। त्यो पनि महत्वपूर्ण। एसइईको ग्रेडले तपाईंको जीवन निर्धारण गर्दैन।
‘ए प्लस’ आए पनि ‘बि प्लस’ वा जुनसुकै ग्रेड आए पनि त्यो तपाईंको बौद्धिक क्षमताको मापन हो। त्यसले तपाईंको आन्तरिक क्षमताको मापन गर्दैन। तपाईंको सुनिश्चित भविष्यको लागि त्यो पर्याप्त छैन। त्यस कारण ग्रेडलाई उति धेरै महत्व दिनु राम्रो होइन। अहिलेसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च ग्रेड ल्याउन सङ्घर्षरत हुनु भयो। के अब जीवनको ग्रेड बढाउने कामको लागि तयार हुनुहुन्छ ? कक्षा दशसम्मको पढाइ एउटा अध्याय थियो। त्यसमा जे जस्तो प्रदर्शन गरियो, त्यसलाई भुलिदिनुमा नै भलाइ हुन्छ। प्लस टुदेखिको पढाइ नयाँ अध्यायको सुरुवात हो। यस अध्यायमा तपाईं के कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईंको जीवन निर्धारण गर्छ। शैक्षिक ग्रेडसँगै व्यवहार कौशल विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नै अग्रसरतामा व्यक्तित्व विकास लगायत जीवनपयोगी शिक्षामा समय र ऊर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र जीवनको ग्रेड बढाउन सकिन्छ। जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। यसका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एक, मानवीय आवश्यकता। दुई, सफल हुन चाहिने उत्कृष्ट दश कौशल। यसले शैक्षिक मात्र नभएर जीवनको ग्रेड बढाउन आधार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।